Teratany amerikana mety manontany zana-drahalahy iray - Fifindrà-Monina
verizon iphone tsy misy karatra SIM
Ny iphone-ko tsy miasa afa-tsy amin'ny headphones
miraikitra amin'ny sary famantarana paoma ny iphone 7
Afaka manontany zana-drahalahin-jaza iray ve ny teratany amerikana iray?
Un Ciudadano Americano Puede Pedir Un Sobrino
Afaka mangataka zana-drahalahiny ve ny teratany amerikanina iray? .
Misy fomba maromaro a Teratany amerikana MEYfanampiana a zanak'anabavy na zana-drahalahy mifindra monina any USA ary mahazo a karatra maintso , fantatra koa amin'ny hoe ara-dalàna ny toerana misy ny mponina ( LPR ). Mampalahelo fa tsy misy sokajy visa kokoa ny mpianakavy na olona akaiky anao izay mamela anao hanohana mivantana ny fifindra-monina.
Tokony handinika ny iray amin'ireto làlana ireto ianao:
1. MITADIAVA AN'NY ANKELO NIECE NA NEPHEW EO AMIN'NY 16 taona, manao azy ireo ho mpifanerasera haingana.
Ny sokajy havana akaiky (IR) mamela ny lalana haingana indrindra mankany amin'ny fifindra-monina, satria tsy misy fetra isan-taona amin'ny isan'ny visa IR. Ny sokajy IR dia misy ho an'ireo mpianakavy manaraka ao amin'ny teratany A.S.
Ny zanakao tsy manambady latsaky ny 21 taona; na
Kamboty latsaky ny 16 taona izay nanangana tany ivelan'i Etazonia na izay hanangana raha vao tonga any Etazonia izy ireo.
2. TORIO AMIN'NY RAIN'NY NIECE NA NEPHEW ANAO VISA PREFERENNY FIANAKAVIANA.
Ny sokajy visa an'ny safidin'ny fianakaviana mamela ny olom-pirenena amerikana mihoatra ny 21 taona manohana ny fifindra-monina ny iray tampo aminao , iharan'ny a 65 000 sarany isan-taona . Ny fangatahan'i rahalahy afaka mampiditra ny vady sy zanaka latsaky ny 21 taona .
Raha ny zanak'anabavikely na zana-drahalahy dia efa 21 taona na mihoatra, tsy maintsy miandry izy ireo mandra-pahazoan'ny rahalahiny ny satan'ny LPR . Ny LPR dia afaka manohana ny fifindra-monina an'ny vady aman-janany tsy manambady eo ambanin'ny sokajy visa tian'ny fianakaviana ary iharan'ny sarany isan-taona 114,200 .
Raha efa manambady ny zanak'anabavinao na zana-drahalahinao dia tsy maintsy miandry izy ireo mandra-piavin'ny ray aman-dreniny any Etazonia. Ny olom-pirenena amerikana, fa tsy ny LPR, dia afaka manohana ny fifindra-monina an-janany manambady eo ambanin'ny sokajy safidim-pianakaviana ary iharan'ny sarany 23 400 isan-taona .
3. SORATRA NY NIECE NA NEPHEW ANAO ASA MPIASA NY BUSINESS-nao.
Raha manana orinasa ianao dia azonao atao ny manohana ny zanak'anabavinao na ny zana-drahalahinao hanana visa asa (EB). Tsy midika velively ny fifandraisan'ny fianakavianao velively, fa hiorina mafy amin'ny fahaizanao mandray ilay asa.
Raha manana diplaoma efa-taona farafaharatsiny ny olona iray ao amin'ny fianakavianao ary afaka manakarama azy ireo amin'ny toerana mety ao anatin'ny orinasanao dia azonao atao ny manohana azy ireo amin'ny asehoy EB-3 matihanina. Raha manana diplaoma mandroso ny zana-drahalahinao na zana-drahalahinao, toy ny MBA na mari-pahaizana mari-pahaizana hafa na avo kokoa, dia afaka mahazo mari-pahaizana visa EB-2A .
NY MPANORATRA FANORENANA MAHAYMANAMPIANA ANAO
Ny fizotrany, ny sarany ary ny fizotry ny fotoana dia miavaka amin'ny tsirairay amin'ireo safidy ireo. Ny mpisolovava iray efa za-draharaha momba ny fifindra-monina dia afaka manombatombana ireo safidy ireo ary mamaritra hoe iza no tena misy dikany aminao.
Ahoana no hanohanako ny zanaky ny zanaky ny zanako lahy any Etazonia?
Ny olom-pirenena amerikana dia tsy afaka manohana ny zana-drahalahin'izy ireo ary ny ray aman-dreniny, ny iray tampo aminy, ny vady aman-janany ihany no azony atao. Na izany aza, amin'ny maha olom-pirenena amerikana anao dia azonao atao ny manohana ny ray aman-drenin'ny zanak'anabavinao ary raha ny rahalahinao na ny reninao ny zanak'anabavinao dia azonao atao ny manohana ara-dalàna any Etazonia, eo ambanin'ny fianakavian'ny sokajy tiany.
Rehefa mifindra monina any Etazonia ny rahalahinao dia afaka mametraka petra-petra-taratasy ho an'ny zana-drahalahinao izy ary manampy azy hahazo karatra Green Green any Etazonia.. Raha manana orinasa any Etazonia ianao ary raha mihoatra ny 18 taona ny zanak'anabavinao ary manana ny fahaiza-manao mifandraika amin'izany dia azonao atao ny manolotra asa manontolo andro ho azy sy manohana ny karatra Green Green amerikana mifototra amin'ny asa.
Noho izany, tsy maintsy tadidinao fa tsy afaka mametraka peti-petra-pianakaviana ianao hanohana ny zana-drahalahinao amin'ny US Green Card. Toy izany koa, raha te-hanangana orinasa any Etazonia ny zanak'anabavinao dia afaka mampiasa vola amin'ny firenena izy ary mahazo asehoy EB-5 ary mifindra monina any Etazonia.
Olom-pirenena amerikanaazon'izy ireo atao ny manohana sokajy havana vitsivitsy, toy ny vady, ray aman-dreny, zanaka tsy manambady sy manambady latsaky ny 21 taona sy ny iray tam-po aminy, raha ny mpihazona Green Card ihany no afaka manohana ny zanany sy ny vady. Na izany aza, amin'ny maha olom-pirenena amerikana anao dia azonao atao ny manampy ny zanak'anabavinao hifindra any Etazonia amin'ny alàlan'ny fametrahana ilay Form I-130 , Fanangonan-tsonia ho an'ny havana vahinyary ny fanohanana ny ray aman-dreniny.
Saingy tsy maintsy tadidinao fa ny havanao dia tsy havanao akaiky ary hapetraka ao anaty lisitra fiandrasana izy ireo ary omena visa mpifindra monina aorian'ny fanavaozana ny daty laharam-pahamehana ary aorian'ny fanavaozana ny laharan'ny visa amin'ny sokajy manokana ananany.
Na izany aza, misy safidy hafa hanohana ny zanak'anabavinao ary raha tsy afaka mikarakara ny zana-drahalahinao ny ray aman-dreninao ary raha noraisinao izy dia azonao atao ny manohana ny zanakao natsanganao ho karatra Green Green amerikana. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy fantatrao ny azo ampiharina lalàna sy fepetra hafa.
Mandritra ny fametrahana fangatahana mpifindra monina ho an'ny rahalahinao, ny zana-drahalahinao dia mety hiseho ao anatin'io fanangonan-tsonia io ho fiankinan-doha ary mety ho tonga mponina ara-dalàna raha toa kosa ny rahalahinao lasa mponina ara-dalàna. Na izany aza, ny zana-drahalahinao dia afaka mifindra monina miaraka amin'ny rainy na ny reniny raha latsaky ny 21 taona izy ary raha mpitovo izy. Toy izany koa ireo mpandray izay mahazo karatra maintso avy any Etazonia.
Amin'ny alàlan'ny fanasokajiana safidy dia azon'izy ireo atao ny mangataka ho an'ny zanany izay tsy nahazo toerana ara-dalàna raha lasa mponina ara-dalàna ao amin'ny firenena izy ireo. Amin'ity tranga ity, ny zana-drahalahinao dia hahazo alalana tombony arahana. Ary koa, tsy mila mandefa a ianao Form I-130 misaraka ho an'ny zanak'anabavinao ary mety tsy voatery hiandry ianao mandra-pahatongan'ny nomeraon'ny visa. Na izany aza,
Raha te-hisoratra visa ho an'ny mpifindra monina dia tsy maintsy manaporofo ny rahalahinao fa misy fifandraisana eo aminy sy ny zana-drahalahiny ary ny rahalahiny dia nahazo toerana ara-dalàna tao amin'ny sokajy safidim-pianakaviana. Raha mahafeno ny fepetra takiana aminao ny rahalahinao dia tsy maintsy apetrakao ny Form I-824, Request for Action amin'ny fangatahana ankatoavina na petition miaraka amin'ny petition izay napetrakao teo am-pitakiana status ara-dalàna, kopian'ny Form I-797 , Fampandrenesana momba ny hetsika sy kopian'ny karatra maintso anao.
Ny rahalahinao izay any Etazonia dia afaka mametraka ilay rakitra Form I-824 ho an'ny zanak'anabavinao, raha mbola tsy natolotrao ny Form I-485 , Fangatahana fisoratana anarana trano maharitra na fanitsiana ny satan'ny, ho fanitsiana ny toerana misy azy ary amin'ity tranga ity dia tsy maintsy asehony ny Form I-824 ho an'ny zanakao mandritra ny fotoana anolorany ny Form I-485 ho an'ny fanitsiana ny satan'ny.
Na izany aza, ny rahalahinao dia mila mifandray amin'ny National Visa Center ( NVC ), hametraka fanangonan-tsonia hanohana ny zanakao, raha nahazo visa mpifindra monina avy amin'ny kaonsily amerikana any ivelany ianao. Noho izany, afaka manampy ankolaka ny zanak'anabavinao hifindra monina any Etazonia ianao amin'ny alàlan'ny fanolorana ny ray aman-dreniny ho an'ny karatra Green Green any Etazonia.
Ity dia lahatsoratra fampahalalana. Tsy torohevitra araka ny lalàna izany.
Ny vaovao eto amin'ity pejy ity dia avy USCIS ary loharano azo antoka hafa. Redargentina dia tsy manome torohevitra ara-dalàna na ara-dalàna, na koa natao ho raisina ho toy ny torohevitra ara-dalàna.
Loharano sy zon'ny mpamorona: Ny loharanom-pahalalana momba ny visa sy ny fifindra-monina etsy ambony ary ireo manana zon'ny mpamorona dia:
Departemantam-panjakana amerikana - URL: www.travel.state.gov
Ny mpijery / mpampiasa ity pejy web ity dia tokony hampiasa ny fampahalalana etsy ambony fotsiny ho torolàlana, ary tokony hifandray foana amin'ireo loharano etsy ambony na solontenan'ny governemanta mpampiasa ho an'ny fampahalalana vaovao indrindra tamin'izany fotoana izany, alohan'ny hanapahany hevitra hamakivaky. mankany amin'ilay firenena na toerana itodiana.
2. TORIO AMIN'NY RAIN'NY NIECE NA NEPHEW ANAO NY VISA AN'NY FIANAKAVIANA.
MPANORATRA MPANORATRA AN-DAHATSORATRA afaka manampy anao
Afaka alefa sesitany ve ny teratany amerikana iray?
Afaka mandeha irery amin'ny fiaramanidina mankany Etazonia ve ny zaza?
Azon'ny mponina maharitra atao ve ny mangataka amin'ny ray aman-dreniny?
Maharitra hafiriana ny fangatahana zaza efa lehibe?
Izaho dia olom-pirenena amerikana ary te hanontany ny ray aman-dreniko aho
Ahoana no fomba hahatongavanao ho olom-pirenena amerikana tsy miteny anglisy